Ding ding dang! Christmas na-abịa-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọala ngwa mma CO., LTD
Ding ding dang! Ekeresimesi na-abịa
Oge: 2020-12-23 Hits: 26
Fireworks nke oge a nwere obi ụtọ, meteor nke oge a na-ekpe ekpere, na-efu nke oge emetụ, na m dị nnọọ chọrọ ka ị na-ahụ ozi nke oge ịghọta: M ji ezi obi na-achọ gị a ndụ obi ụtọ!Adịkwa Christmas!
Kwa abalị, ụbọchị ọ bụla na-atụ uche, onye hụrụ gị n'anya, Christmas Eve, ọ bụ ezie na ị bụ onye owu na-ama, mana mara mma!N'ihi ngọzi m sitere n'obi ...
Nightend Christmas Christmas, kpakpando na-achọ ihe ha chọrọ;Ka uwa nile di n’udo, nwe kwa obi-utọ!
Dozie ebe ahụ, kụọ osisi Krismas, kee ihe swiiti ahụ, kwụnye onyinye ahụ, yikwasị uwe Krismas, nye gị ngọzi, akwụkwọ ozi edere edere, Ekeresimesi izipu, ezumike ezumike, ịchọrọ ka ị nwee ọ happyụ!
Ekeresimesi na-abịa, Santa Claus ka m gwa gị n'ọdịnihu: n'ihi na ụlọ gị enweghị anwụrụ anwụ, n'afọ a, ọ ga-akụ mgbịrịgba ọnụ ụzọ gị na elekere iri na abụọ nke elekere ekeresimesi, a ga-ezigara onyinye ahụ n'onwe gị n'aka gị, cheta iji ndidi chere n'ụlọ, Chọrọ gị a ekeresimesi a!
Udo, mgbịrịgba;Ekeresimesi, ekwe ukwe;Santa Claus dara site na mbara igwe.Neon ọkụ, ọkụ;Osisi Krismas, na-egbuke egbuke;A Christmas ekele na bụ'abụ ị!Ihunanya Christmas, auspicious jisie na n'akụkụ!Adịkwa Christmas!
Ekeresimesi, echiche m na-arị elu;N'ịhụ gị n'anya kwa ụbọchị, agba m na-afanyekwa;Oge nke ọ bụla m na-eche maka gị, agba m na-agbada;Ezigbo, ekeresimesi na-abịa, chọọ ka ị nwee obi ụtọ!
Paragraf nke ndụ ọ bụla, a ga-enwe owuwe ihe ubi a na-atụghị anya ya, mmegharị ọ bụla agaghị echefu, ngọzi Krismas nye gị, bụ ihe niile m na-atụ uche, ịchọrọ gị ekeresimesi dị mma!
Gee ntị, mgbịrịgba nke Ekeresimesi Krismas, nke ahụ bụ ekeresimesi m;Lee, foto nke ezimezi oku na-efe efe, nke ahụ bụ kaadị m ekeresimesi;Gee ntị, ụdaolu nke ozi ederede, nke a bụ ọchịchọ ekeresimesi m: A sị m na ọ Christmasụ Christmas!
Obi ụtọ na-enye obi ụtọ, onye nwere ihu ọma, ọ dị mma iziga;Sọks na-enweghị atụ na okpu obi ụtọ na-achụpụ obi ọjọọ na chi ọjọọ;Akwụkwọ ozi na-ekpo ọkụ, ezigbo obi, achọrọ m ka ngọzi m bụrụ eziokwu.Adịkwa ekeresimesi ọma!
Achọrọ m ka ị bụrụ ekeresimesi dị mma na ụbọchị na-atọ ụtọ kwa ụbọchị!
Previous: Ezi uche na ojiji nke taya ụgbọ ala
Ọzọ: Ihe dị mkpa nke taya ụgbọ ala pụtara ìhè, yabụ otu esi edozi taya ụgbọ ala